Waaxda tallaalka ee Gobolka Västernorrland ballan ka qabso - 1177
Boka tid för vaccination mot covid-19 Västernorrland - somaliskaThe content concerns Västernorrland
Haddii 12 sano aad buuxsatay ama da'daada ka wayn tahay, waxaad imminka ballansan kartaa tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19]. Halkaan hoos ka eeg liiska waaxyada layska tallaalo oo aad ballan ka qabsan karto.
Waaxyada laysak tallaalo
Waaxda tallaalka - Degmada Härnösand, – albaabka waqooyi
Waaxda tallaalka - Degmada Sollefteå
Sidee baa ballanka loo qabsadaa?
Iyadoo la adeegsanayo farsamada digitaaalka ee baraha internetka ee tallaalada
Qaybta tallaalka ee ugu horeeyso waa inaad laf ahaantaada (ama adigoo qof ehel ama saaxiib ah adeegsanayo) qabsato, oona adigoo booqda waaxda aad ka xulatay isku-xireha ku hoos qoran cinwaanka (Vaccinationseneheter). U ma baahnid inaad haysato aqoonsiga farsamada digitalka ku salaysan ee loo yaqaanno [e-legitimation]. Waxaad jag-siisa isku-xireha bogga waaxda tallaalka kaddib waxaa lagu gudbinayaa goobta laga aqristo warbixinta ballan-qabsashada.
Iyadoo la adeegsanayo app-ka "Mitt Vaccin"
Waxaad kaloo soo degsan kartaa App-ka ”Mitt vaccin” ee loogu talagalay mobaylada (Android) ama (Iphone). Sida aad ballan-qabsashada ku maarayso awgeed waxaa ku guda-geli kartaa aqoonsiga farsamada digitalka ku salaysan ee loo yaqaanno [e-legitimation]. Haddaba shuruudaha isticmaaalka App-ka ”MittVaccin” waa in smartphone-kaaga u isticmaalo:
Android 9 ama ka cusub.
iOS 13 ama ka cusub.
Markii ballanka aad laf ahaantaada qabsanayso:
Waa inaad sheegto sababta booqashada. Waxaa la hela xulasho gaar ahaan loogu talagalay dhallinyarada da'dooda u dhaxayso 16-17 sano.
Haddii weli 18 sano aadan buuxsan waa inaad sheegto, waa haddii oggolaansho aadan xilhaayeha xannaanadda/waalidka aadan ka haysan. Ku qor khaanadda ”besökstyp”.
Hab-dhiska ballan-qabsashada wuxuu aqrinayaa Tobbanka lambar aqoonsiga ee adiga ku gaar ah, waxaana ballan qabsan kartaa haddii da'daada ballan-qabsashada loo oggol yahay.
Saacadaha la ballansan karo waa haddba maaddooyinka tallaalka kala duwan ee la heli karo. Haddii ballan aad ka waayso, waxaa u sabab ah in saacadaha markaas ay buux dhafeen, ama aan lagu oggolayn inaad iska tallaasho waaxda aad xulatay, maadaama maaddada tallaalka ee aad u baahan tahay aanan la helayn, waxaad tijaabisa inaad la xiriirto Waaxda tallaalka kale, ama hal ama dhawr maalmood kaddib mar labaad booqo bogga laga ballansado, waxaa dhici karto in markaas ay ku suroowdo ballan qabsashada.
Taageerada khadka taleefanka ku salaysan
Haddii adigoo adeegsanayo farsamada digitaalka ama App-ka "Mitt vaccin" aynan ku suurtagalayn inaad ballan qabsato, caawinaadda ballan-qabsashada darteed la xiriir Taageerada khadka taleefanka ku salaysan ee Gobolka Västernorrland. Wac 0611-804 00 maalmaha shaqada (isniin-jimce) saacadaha 08.00-18.00.
Haddii weli 12-17 sano aadan buuxsan
Haddii weli 12 sano aadan buuxsan, waa inaad oggolaansho waalidiintaada ama xilhaayeha xannaanadda ka haysato, ama haddii shaqaalaha xarumaha daryeel-caafimaadeedka ay arrintaada ku qiimeeyaan inaad isku filan tahay. Markii aad ballanka qabsanayso waa inaad na wargeliso inaad oggolaanshada noocaas aad haysato. Qiimaynta waxaa ku dhaqaaqa shaqaalaha waaxda tallaalka.
Waa inaad buuxiso foom ay waalidiintaada ama qof kale oo ah xilhaayaha xannaanadda hoos ka saxiixaan in ay raali ka yihiin in lagu tallaalo. Foomka daabaco kaddib la kaalay maalinta lagu tallaali doono.
Haddii xilhaayeha xannaanadda/waalidka usan maalintaas ku wehlin karin, la kaalay kaarka aqoonsiga.
Irbada 3 ee adiga oo 18 sano jir ama ka weyn ah
Dadka 18 sano jir ka ama ka weyn iyo kooxaha khatarta ugu jira waxa la siiyaa irbada saddexaad (irbad dheeriya) oo talaalka Covid-19. Waxa la qaadan karaa isla marka talaalka durayga. Fiiri Talaalka durayga ee Västernorrland
Kooxaha khatara ugu jira: Talaalka durayga
OGOW Irbada 3 waxa la siyaa waxaan ka yareyn shan bilood ka dib irbada labaad, hadaba laguma talaali doono intaasi ka hor. Waxa muhiima inaad xasuusnaatid markaad diwaangalinaysid balantaada. Waxaad ka heli doontaa linkiyada dhamaan qeybaha iyo xarumaha caafimaadka/xarumaha daryeelka caafimaadka oo laga dooran karo bogan hoos yimaada ciwaanka "Qeybaha talaalka"
Waxaad sidoo kale ka wici karaa shaqaalaha tilifoonka: 0611-804 00.
Haddii aadan haysan Tobbanka lambar aqoonsiga [personnummer] ee dalka Iswiidan ama lambarka [reservnummer]
Haddii aadan haysan Tobbanka lambar aqoonsiga [personnummer] ee dalka Iswiidan ama lambarka [reservnummer], suurtagal ma noqon karto in adigoo adeegsanayo bogga ballansashada ee barta internet 1177.se aad laf ahaantaada ballansato tallaalka cudurka [Covid-19] looga hortago.
Xaaladdaas ballansashada tallaalka awgeed, waxaad wici kartaa khadka [telefonsupporten],
Saacadaha ay furan tahay waa:
Falcelinta maaddada tallaalka/aleerjiya
Haddii tallaal awgiis berri hore aad dareentay falcelinta culus ee aleerjiya u sabab ahayd, taasoo ku qasabtay inaad daryeel-caafimaadeedka raadsato, waa inaad ballan-qabsahsada kahor talo-siin awgeed la xiriito rugta daryeel-caafimaadeedka ee aad ka tirsan tahay. Sababto ah waxaa la qiimayn doonaa sida hab sugan oo aadan ku xannuunsan lagu tallaali karo.
Haddii shaqaalaha rugta daryeel-caafimaadeedka ay xaaladdaada ku qiimeeyaan in maaddada tallaalka lagugu tallaali karo, waa in laf ahaantaada ballanka qabsata, kaddib markii aad buuxinayso su'allaha ku qoran bayaanka caafimaadka, calaamadeey ”Maya” su'aasha ku saabsan haddii berri hore aad dareentay falcelinta cusub ee tallaalka.
Haddiise shaqaalaha rugta daryeel-caafimaadeedka ay xaaladdaada ku qiimeeyaan in maaddada tallaalka lagugu tallaalo iyadoo xaaladda gaar ahaan loo kormeeri doono, xaaladdaas rugta waxay arrintaada u gudbin doonta goob isbitaal. Markaas kaddib halkaas ayaa lagaga yeeri doonaa.
Falcelinta culus ee aleerjiyada badi ahaan dhaqsi ayay soo ifbaxda, 30 daqiiqado gudahood, kaddib markii lagu geystay wax aad aleerji ku tahay.
Falcelinta waxay tusaale noqon kartaa:
labolabo/yaaqyaaqsi iyo mataag
wadnegaraacid aad u culus
Xaaladdaas falcelinta aad ayay culus tahay, qofkuna waa in u taga daryeel-caafimaadeedka degdegga ama rugta daryeel-caafimaadeedka.
Dawooyinka dhiigga khafiifiya
Haddii aad isticmaasho dawooyinka dhiigga khafiifiya, aqriso warbixinta ku qoran bogga "Frågor och svar om vaccination mot covid-19", under rubriken "Kan jag vaccinera mig?""
Waxaan qaata dawo dhiigga khafiifisa haddaba sidee baa u dhaqma?
Waxay khuseeysa qofka adigoo kale ah oo qaato dawada nooca:
Waran, Warfarin, Eliquis, Pradaxa, Lixiana, Xarelto, Fragmin, Inohep ama Heparin. Haddii aad qaadato dawooyinka nooc kale oo ah ku kuwa dhiigga khafiifiyaan, waad is-tallaali kartaa iyadoo aan fiirogaar la siin goorta dawada aad qaadato
Haddii aad qaadato dawooyinka Waran ama Warfarin:
Haddii heerka PK-INR u xasilan yahay, oona la kormeero muddo kasta oo 4 toddobaad ka badan, kormeerid gaar la'aan ayaa lagu tallaali karaa.
Haddiise muddada kormeerida aynan ka badnayn 4 toddobaad, waa inaad rugta AK-mottagningen wargelisa taariikhda lagu tallaali doono, sidi loo baaro heerka PK-INR dartiisa, isla sida habka joogtada qorshaynta daryeelidaha kale.
Haddii aad qaadato dawooyinka Waran ama Warfarin wadajir dawooyin kale oo dhiigga khafiifiyaan sida trombocythämmare (tusale acetylsalicylsyra, klopidogrel, tikagrelor) waa inaad rugta AK-mottagningen wargelisa taariikhda lagu tallaali doono, sidi loo baaro heerka PK-INR dartiisa, isla sida habka joogtada qorshaynta daryeelidaha kale.
Haddii aad qaadato dawooyinka Eliquis iyo Pradaxa:
Ha qaadan qaybta aroortii antikoagulantia maalinta tallaalka laakin tan habeenkii qaado ugu yaraan 2 saacaddood kaddib markii lagu tallaalo.
Haddii aad qaadato dawooyinka Lixiana, Xarelto, Fragmin ama Inohep:
Qaado kiniiniyaasha/is-dur antikoagulantia 2 saacaddood kaddib markii lagu tallaalo.
Dawooyinka kale ee dhiigga khafiifiyaan
Haddii aad qaadato dawooyinka kale ee dhiigga khafiifiyaan sida trombocythämmare, tusaale acetylsalicylsyra, klopidogrel, tikagrelor laakin aadan la qaadan dawooyinka Waran ama Warfarin
Sida caadiga kiniiniyaasha u qaado iyadoo fiirogaar aan la siinin wakhtiga tallaalka.
Sidatan ayaa ballamada loo ciribtira
Haddii aad xannuunsato waa inaad adigoo adeegsanayo barta internet 1177.se ama khadka taleefanka 0611- 804 00 ballanka ciribtirta. Kaddib markii aad bogsato ayaa ballan cusub qabsan kartaa. Kaddib markii aad ballanka ciribtirto waxaa xaqiijinta ciribtirida lagugu soo diri doonaa farinta sms ama e-mail.
Caawinaadda khadka taleefanka ku salaysan
Haddii aadan adeegsan karin aqoonsiga farsamada digitalka ku salaysan ee ee loo yaqaanno [e-legitimation], waxaad la xiriiri kartaa Caawinaadda khadka taleefanka ku salaysan ee Maamulka Gobolka Västernorrland, iyaga ayaa kaddib ka caawini doono ballan-qabsashada.
Wac 0611-804 00
isniin-jimce, saacadaha 08.00-16.00,
Dadka badidooda waxay Caawinaadda khadka taleefanka ku salaysan soo wacaan subaxdii ama gelinka hore. Sidaas awgeed, haddii aad na soo wacdo saacadaha dambe ee gelinka dambe fursadda ballan-qabsashada way ka wanaagsan tahay.